I-guesthouse yasemaphandleni - I-Airbnb
Zuidbroek, Groningen, i-Netherlands
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Esther
Igumbi lokungena elinefenisha ekhangayo emaphethelweni e-Zuidbroek enombono ongavimbekile. Isakhiwo sitholakala emaphethelweni edolobhana elisemgwaqweni ongasekho phakathi namasimu amazambane nama-hop.
Kuyikhabethe lamalogi elinefenisha ephelele enawo wonke ama-mod cons. Ngendlu yokugezela kanye nekhishi eligcwele ngokugcwele ukuze ukwazi ukuziphekela.
Itafula lokudlela kanye nosofa kwenza kube indawo ekahle yokuhlala ngaphakathi, kodwa njengoba uvulandi ucwebezelisiwe ngokwengxenye, ungakwazi futhi ukuhlala ngaphandle uvikelekile lapho isimo sezulu singesihle kangako.
I-log cabin inomgwaqo wayo lapho imoto ingapaka khona.
Ngezinsuku ezimnandi kunezihlalo ezimbalwa ezingasetshenziswa. Isihlahla somcako esikhulu, eduze kwendlu yezingodo, sibe sesisebenza njengepharasoli yemvelo.
Njalo ngezikhathi ezithile izinkukhu ezikhululekile engadini futhi echibini kukhona i-koi carp, i-sturgeon kanye ne-turtle ongayibona ekushiseni ilanga onqenqemeni esimweni sezulu esishisayo.
IZuidbroek isendaweni emaphakathi, imizuzu eyi-15 kuphela ngemoto usuka edolobheni laseGroningen. isisekelo esihle sokwenza zonke izinhlobo zezinto, njengokuya esifundeni se-wadden, kodwa futhi namahlathi aphezulu eDrenthe noma ukuvakashela idolobha elihle labafundi laseGroningen. Kodwa indawo nayo inhle ukujabulela izinsuku buthule engadini
Zizwe ukhululekile ukungithumela noma ungishayele/ungithumelele imiyalezo nganoma yimiphi imibuzo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Zuidbroek namaphethelo